Fahad Yaasiin oo Askarta Sirdoonka Xildhibaanno ka dhigaya | KEYDMEDIA ONLINE
Fahad Yaasiin oo Askarta Sirdoonka Xildhibaanno ka dhigaya
Taliyaha NISA Fahad Yaasiin waxuu isku bedelay madaxa ololaha Farmaajo, isagoo Villa Somalia ku dhex dhuumaalaysanaya ayuu dalka Taleefonka ka maamulayaa.
MUQDISHO, Soomaaliya - Farmaajo ayaa xusul-duub ugu jira inuu marlabaad Madaxweyne ka noqdo Soomaaliya, isagoo afartii sano ee uu xafiiska joogay lumiyay fursado qaali ah, oo dalka lagu gaarsiin karay nabad, horumar iyo doorashooyin qof iyo cod ah.
Inuu soo noqdo ma ahan wax sahlan iyo dhaqan Soomaaliya looga bartay inuu qof hal mar Madaxweyne noqday in mar kale dib loo doorto, laakiin Fahad Yaasiin oo ku tashanaya dhaqaalaha Qatar ayaa balan-qaadey sanadkan inuu Farmaajo soo celin doono, wado kastana uu u marayo taasi.
Macluumaad cusub oo ay Keydmedia Online heshay ayaa muujinaysa inuu Fahad Yaasiin hadda askarta katirsan NISA uu intooda badan ka dhigayo Xildhibaanno, uu doonayo inay u codeeyaan Farmaajo 8-da Febuary 2020.
Sidoo kale, Fahad Yaasiin ayaa ka shaqeynaya in Odayaasha ergada ah ee wax dooranaysa uu isaga soo xulo, maadaama uu gacanta ku hayo gudiyadda doorashadda oo xafiiskiisa laga maamulo dhismahooda.
Saddex Maamul Goboleed, oo kala ah Galmudug, HirShabeelle iyo Koonfur Galbeed waxaa jooga madax uu Fahad Yaasiin geeyay, isagoo ku tashanaya Xildhibaanada halkaas ka imaanaya, waxaana sanadkii tagey la wareegay Gedo oo doorashadda Xildhibaanada Garbahaarey uu doonayo inuu isagu maamulo.
Dhanka Ciidanka, Fahad ayaa askar kumanaan gaareysa u diray Eritrea si ay ugu soo qaataan tababar, waxaana qaarkooda ay kusoo laabteen dhawaan Muqdisho iyagoo ku biiray Nabad Sugida, waxaana suurta-gal ah inuu u adeegsado caburinta mucaaradka xiliga doorashadda.
Qatar waxay dagaal kula jirtaa Imaaraadka oo la sheegay inuu wato dhowr musharax, oo ay kamid yihiin C/raxmaan Cabdishakuur iyo Sheekh Shariif, waxaana suurta-gal ah in ay soo baxayaan musharaxiin dalal kale ay wataan.
Doorashooyinka Soomaaliya ma ahan kuwa gacanta shacabka ku jira, oo waxaa laga maamula dowlado shisheeye, gaar ahaan kuwa Khaliija Carabta oo ku loolamaya khayraadka dalka iyo istaraatiijiyad ahaan halka uu ku yaalla, oo ay rabaan inay saldhigyo Ciidan ka dhistaan.